जान्नुहोस् के हो ? कृषि बीमा… – Beema News
जान्नुहोस् के हो ? कृषि बीमा…
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०७४, शुक्रबार १२:३०
काठमाडौ÷नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा नहुदा कृषि पेशा प्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । अवसर र संभावना हुदा हुदै पनि कृषकले लगानीको जोखिम मोल्न नसक्दा कृषकहरु सधै मारमा पर्ने गरेका छन् । तर कृषकको लगानीलाई सुरक्षित राख्न बीमा कम्पनीहहरुले कृषि बीमाका बिभिन्न खाले योजना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
कृषि बीमा अन्र्तगत पशुपंछी पालन, माछा पालन, तथा धान, तरकारी, फलफुल खेती आदि व्यवसायहरूको बीमा गर्न सकिन्छ । यस्तो बीमा गरेमा आगलागि, दैवीप्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीबेरी), रोग, किरा आदिबाट कुनै पनि प्रकारको हानी भएमा कृषकलाई नोक्सानी बराबरको रकम उपलब्ध गराईन्छ । कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन पनि कृषि बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाई माछा पालन गरिरहनु भएको छ भने सरकारी अनुदानमा माछाको बीमा गर्न सकिन्छ । माछापालनमा आउन सक्ने संभावित जोखिमबाट हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बच्नको लागि माछा बीमा गर्न सकिन्छ । माछा बीमाका लागि सरकारले ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अनुदान समेत वितरण गर्दै आएको छ । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले २९ करोड ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको माछा बीमा समेत गरिसकेका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले बढी हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा योजना जारी गरेका थिए । त्यस्तै, सो अवधिमा कम्पनीले माछा बीमा बापत ६३ लाख ३२ हजार बीमाशुल्क आम्दानी गर्न गरेका छन् । सो अवधिमा कम्पनीहरूले १२ लाख १० हजार दाबी भुक्तानी पनि गरेका छन् । कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कृषि बीमा अन्तर्गत माछा बीमाको हिस्सा ५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा पनि माछा बीमाको हिस्सा सोही अनुपातमा थियो ।
कृषकहरुको परिश्रमलाई खेरा जान नदिन सरकारले बाली बीमाको पनि व्यवस्था गरेको छ । असिना, बाढी, पहिरो लगायतका कारणले बालीमा क्षति पुग्ने भएकाले पनि कृषकले बालि बीमा गराउन अनिवार्य हुन्छ ।
बीमा समितीको तथ्याकंले देखायअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूले ४३ करोड ८७ लाख रुपैँया बराबरको बाली बिमा गरेका थिय् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब तीन गुणाले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँबराबरको बाली बिमा गरेका थिए । सोहि अवधिमा कम्पनीहरूले बाली बीमा बापत २ करोड १६ लाख बीमा शुल्कआर्जन गरेका छन् भने दाबी बापत ९७ लाख ३९ हजार भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै, सो अवधिमा सरकारले बाली बीमाका लागि १ करोड ६३ लाख अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ । कम्पनीले जारी गरेका कुल कृषि बीमा योजना अन्तर्गत बाली बीमाको हिस्सा ७ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा भने बाली बीमाको हिस्सा ५ प्रतिशतमात्रै थियो ।
पशु बीमा प्रति कृषकहरू पहिले देखि नै तुलनात्मक रूपले आकर्षित देखिएका छन् । कम्पनीहरूले जारी गर्ने कुल कृषि बीमा योजनाहरूमा पशु बीमाको हिस्सा अधिक छ । गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ७० करोड बराबरको पशु बिमा योजना जारी गरेका थिए । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले जम्मा २ अर्ब ४७ करोड बराबरको कृषिबिमा योजना जारी गरेका थिए । त्यस्तै, सो अवधिमा पशु बीमा बापत कम्पनीहरूले २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्कआर्जन गर्न सफलभएभने १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरकाथिए । सो अवधिमा सरकारले पशु बीमाका लागि १७ करोड ४७लाख रुपैयाँअनुदानवितरण गरेको छ ।
कम्पनीहरूले जारी गरेकाकुल कृषि बीमामध्ये बिमांक रकमको आधारमापशु बीमा योजनाको हिस्सा ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ७८ प्रतिशतथियो ।
गतवर्ष कम्पनीहरूले ५६ करोड ४४ लाख बराबरको पन्छि बीमा गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो आवको सोहीअवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ३९ करोड ३९ लाख बराबरको पन्छी बीमा लेख जारी गरेकाथिए ।त्यस्तै, पन्छि बीमा बापत गत आवमा कम्पनीहरूले १ करोड ५७ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरे भने २५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी समेत गरेका छन् । सो अवधिमा पन्छी बीमामा सरकारले १ करोड १८ लाख अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ ।
कृषि बीमाको फाइदा
बिमा भनेको आर्थिक सुरक्षा हो । कृषि बिमाले कृषकहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिन्छ । हरेक कृषकहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनु कृषि बिमाको उद्देश्य हो । त्यसैले सरकारले पनि यसप्रति कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । बाकिँ २५ प्रतिशत कृषक आफैले भुक्तानी गरे पछि आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय कृषि बीमामा कृषकहरुको अकर्षण बढ्दै गएको देखिए पनि कृषि बीमा योजनामा सबै कृषकहरुको पहुँच भएको देखिदैन । विशेष गरी न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याएको कृषि बीमाको माध्यमबाट कृषकहरूलाई बीमाबारे सचेतना फैलाई कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क भार कम गर्नको निमित्त सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारले अनुदान दिदैं आएपनि कृषकहरुको पहुँचपुग्न सकेको छैन । कृषि बीमाको सुचना कृषकसम्म पु¥याउन विभिन्न तालिमहरू आयोजना गरेपनि, सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय र कृषक स्तरमा कृषि बीमा सम्बन्धि सचेतनाको कमि रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा कृषि बीमामा कृषकहरुको पहुँच प्रभावकारी नदेखिएको हो । सरकारले कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिए पनि कृषकहरु बीमा प्रतिआर्कषण बढ्न नसक्नुमा समन्वय र जनचेतना मुलक कार्यक्रमप्रभाकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ् ।
कृषि बीमा कम्पनीको हिस्सा
बीमा समितिले कृषि बीमालाई अनिवार्य गरी कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर गाउँ पठाएका छज् । तर पनि केही कम्पनीहरू भने कृषिमा आर्कषण हुन सकेको छैन । बिमांक रकमको आधारमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कृषि बीमामध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हिस्सा जम्मा शून्यदशमलव ४४ प्रतिशत देखिएको छ ।
दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्सको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, एनलएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै २९ दशमलव ४१ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको १५ दशमलव ८८ प्रतिशत हिस्सा छ । शिखर इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत हिस्सा छ ।